Madaxweyne Farmaajo oo Buuq iyo Sawaxan kala kulmay khudbad jeedintii maanta ee kalfadhiga BFS | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo Buuq iyo Sawaxan kala kulmay khudbad jeedintii maanta ee...
Madaxweyne Farmaajo oo Buuq iyo Sawaxan kala kulmay khudbad jeedintii maanta ee kalfadhiga BFS
Muqdisho (Halqaran.com) – Khudbad uu Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta hareeyay Buuq iyo Sawaxan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu bilaabay Khudbadda buuq iyo sawaxan kala kulmay qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka.
Hadal jeedinta Madaxweynaha ayaa Muddo daqiiqo ah waxaa hareeyay Buuq, maadaama xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay kala hortageen Madaxweynaha Orin iyo firinbi laga maqlaayay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo sidoo kale Guddoonka Aqalka Sare ayaa dadaal ku bixiyay in Xaaladda la dejiyo, waxaana xildhibaanada ugu baaqayeen in ay ilaaliyaan dastuurka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in xildhibaano yar ay isku dayeen in ay ka hor istaagaan Khudbadbadiisa.
Ugu dambeyn, jawiga xarunta Golaha Shacabka oo caadi kusoo laabtay, ayaa madaxweynaha JF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Khudbadiisa dastuuriga ah u jeediyay si taxadar leh.